မိနျးကလေးတိုငျးထားရှိသငျ့တဲ့ မိနျးမသားမာန – Youth Bar
မိနျးမတဈယောကျက ယောကျြားတဈယောကျရဲ့မကျြနှာရိပျ,မကျြနှာကဲကိုကွညျ့နရေတဲ့ ရိုးအအမိနျးမတဈယောကျရဲ့ဘဝမြိုးအဖွဈမခံပါနဲ့။
ယောကျြားတဈယောကျကို မှီခိုကပျရပျနရေမယျ့ နုံခြာခြာမိနျးမတဈယောကျရဲ့ အဖွဈမြိုးလညျးအရောကျမခံပါနဲ့။
ယောကျြားတဈယောကျက ပေးကမျးထောကျပံ့မှသုံးစှဲရမယျ့ အူတူတူမိနျးမတဈယောကျရဲ့အနအေထားမြိုးကိုလညျး မကရြောကျပါစနေဲ့။
ပွညျ့စုံခမျြးသာပွီးငှရှောနိုငျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျကို အတှတျအခကျြကောငျးကောငျးနဲ့ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ဘဝတဈလြောကျလုံး စိတျခမျြးသာပြျောရှငျမူရမယျလို့ ထငျပါသလား….?
ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ အရိပျအကဲကွညျ့ပွီး အောကျကြို့နရေမယျ့ မာနမဲ့မိနျးမတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနမေယျ့အစား ကိုယျ့ရဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ ကိုယျ့ဘဝကိုယျရပျတညျနနေိုငျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ဘဝက ပိုလို့ဂုဏျတငျ့သလို ယောကျြားတျိုငျးကလညျးအထငျကွီးလေးစားကွပါတယျ။
မိနျးမဆိုတာကိုယျ့မာနနဲ့ကိုယျ ရပျတညျရှငျသနျနနေိုငျရပါမယျ။တဈနဘေ့ယျသူဘယျဝါရဲ့ဇနီးပါလို့ ထုတျပွောရတာထကျ ” ကြှနျမ”ဘယျသူပါလို့ရငျကော့ခေါငျးမော့ပွီး ထုတျဖျောပွောနိုငျတာကကိုယျ့အတှတျ ပိုလို့ဂုဏျယူစရာကောငျးပါတယျ။
Credit -Nan Khin May Win
မိန်းမတစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာရိပ်,မျက်နှာကဲကိုကြည့်နေရတဲ့ ရိုးအအမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမျိုးအဖြစ်မခံပါနဲ့။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မှီခိုကပ်ရပ်နေရမယ့် နုံချာချာမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်မျိုးလည်းအရောက်မခံပါနဲ့။
ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပေးကမ်းထောက်ပံ့မှသုံးစွဲရမယ့် အူတူတူမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်း မကျရောက်ပါစေနဲ့။
ပြည့်စုံချမ်းသာပြီးငွေရှာနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အတွတ်အချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတစ်လျောက်လုံး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မူရမယ်လို့ ထင်ပါသလား….?
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အရိပ်အကဲကြည့်ပြီး အောက်ကျို့နေရမယ့် မာနမဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝက ပိုလို့ဂုဏ်တင့်သလို ယောက်ျားတ်ိုင်းကလည်းအထင်ကြီးလေးစားကြပါတယ်။
မိန်းမဆိုတာကိုယ့်မာနနဲ့ကိုယ် ရပ်တည်ရှင်သန်နေနိုင်ရပါမယ်။တစ်နေ့ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့ဇနီးပါလို့ ထုတ်ပြောရတာထက် ” ကျွန်မ”ဘယ်သူပါလို့ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောနိုင်တာကကိုယ့်အတွတ် ပိုလို့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။